Mpiantso anarana sy talen'ny serivisy
Serivisy momba ny tsiambaratelo anarana
Ho fanampin'ny Office Programs (fantatra ihany koa amin'ny Programme Corporate Office), ny orinasa Incorporated dia manolotra serivisy manokana hanolotra anao manokana fanampiny BIG ary hiaro anao. Mba hiarovana ny mpanjifanay amin'ny mason-javaso maso dia manolotra ny ekentsika ny orinasa Incorporated Serivisy atolotra. Rehefa misoratra anarana amin'ity serivisy ity ianao dia hanendry ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminay hisolo toerana anao ho mpiandraikitra sy mpitantana ny orinasanao. Ity serivisy ity dia misy ho an'ny orinasa Nevada sy Wyoming, ary atolotra amin'ny $ 500 isan-taona. Ny kandidà miaraka amin'ny Programan'ny Legal Shield izay ahafahan'ny olona atolotra hofidiana amin'ny fombafomba fikambanana dia $ 1995 isan-taona fotsiny.
Rehefa voatendry ny manamboninahitra na talen'ny voatondro dia ianao (ny tompon'ny ankamaroan'ny tahiry) dia afaka mijanona amin'ny fifehezana feno sy fifehezana tanteraka ny orinasanao. Manohana ny zon'ny manan-danja amin'ny kaonty ara-bola ianao, dia mitazona ny zo hidirana amin'ny karazana fifanarahana ara-bola na fanofana amin'ny orinasa hafa, sns.. Amin'ny maha-mpitantam-bolan'ny maro an'isa anao dia afaka mifidy ny mpiandraikitra voatendry rehetra avy amin'ny orinasa amin'ny fotoana rehetra raha mifidy amin'izany. Ankoatr'izay, araka ny voalaza tetsy ambony, dia mitazona ny zon'ny manan-danja amin'ny kaonty any amin'ny banky rehetra ianao - ny orinasa tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa dia tsy miraharaha ny vola mifandraika amin'ny orinasa satria tsy manana fidirana na fahefana manoratra amin'ny kaonty orinasa. Izy ireo dia miaro fotsiny ny fiainanao manokana amin'ny fanatanterahana ny fepetra takian'ny lalàna ho an'ny orinasa iray raha manana manam-boninahitra iray na maromaro voatanisa.
Matetika indrindra ny mpanjifanay dia manome baiko ny Corporation, Programme Corporate Corporate ary ny Service Nominee miaraka ho fonosana. Mba hametrahana orinasam-pifandraisana miaraka amin'ny fandaharan'asan'ny Corporate Office sy ny serivisy Nominee, tsidiho ny foiben-toerana azo antoka.